फिट भएर पनि धोनी मैदान बाहिर, उनको स्थानमा कसले खेल्दै ? – Everest Dainik – News from Nepal
फिट भएर पनि धोनी मैदान बाहिर, उनको स्थानमा कसले खेल्दै ?
काठमाडौं, कार्तिक १० । भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी १२ वर्षमा पहिलो पटक ट्वेन्टी–ट्वेन्टी टिममा पर्न असफल भएका छन् । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बिसिसिआई) को छनौट समितिले वेष्ट इन्डिज र अस्ट्रेलियासँगको ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेटका लागि शुक्रबार राति घोषणा गरेको टिममा धोनी पर्न असफल भएका हुन्।
दुई देशसँग भारतले ट्वेन्टी–ट्वेन्टी संस्करणका ६ खेल खेल्नेछ । भारतलाई सन् २००७ मा ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि दिलाएका धोनी लामो समयदेखि खराब लयमा छन् । धोनीको ठाउँमा युवा विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्तले खेल्ने भएका छन् ।
यस्तै वेष्ट इन्डिजसँगको तीन एक दिवसीय तथा अस्ट्रेलियासँगको टेस्ट शृङ्खलाका लागि पनि टिम घोषणा भएको छ । वेष्ट इन्डिजसँगको ट्वेन्टी–ट्वेन्टी शृङ्खलामा भारतको कप्तानी रोहित शर्माले गर्नेछन् । यसमा विराट कोहलीलाई आराम दिइएको छ । रोहितको कप्तानीमा भारतले हालै एसिया कप जितेको थियो ।
३७ वर्षका धोनीले सन् २००६ को डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकासँगको खेलबाट भारतका लागि ट्वेन्टी–ट्वेन्टी खेलमा डेब्यु गरेका थिए । त्यसयताका १०४ ट्वेन्टी–ट्वेन्टी मध्ये ९३ खेलमा धोनी खेलेका छन् । यसक्रममा उनले १४८७ रन बनाएका छन् । धोनी फिट रहेर पनि टिममा नपरेको यो पहिलोपटक हो ।
ट्याग्स: India cricket Team, Mahendrasingh Dhoni